i-bt-auto bulletek i-auto bulletek ye-auto led umzi-mveliso webhalbhu ekhokelwayo-Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd.
I-Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd. (eyaziwa ngokuba yi-BT- AUTO) iseGuangzhou, eChina.Sizibandakanye ngobuchwephesha kwiibhalbhu ze-auto ze-LED iminyaka.Sinikezela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu (i-OEM kunye ne-ODM) kunye neenkonzo kubathengi.
Iimveliso ze-BT-AUTO ze-LED zizinzile kunye nokusebenza okuphezulu.Siye sandisa uluhlu lweemveliso zokukhanyisa i-auto LED, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
I-BT-AUTO yiNkonzo yokuMisa enye, Iintlobo ngeentlobo zeemveliso zethu zinokuhlangabezana nezicelo zabathengi abaninzi.Ngeentengiso zethu ezinamava kunye neqela lenkonzo, siyakwazi ukuqonda inkolelo yethu "uMthengi kuQala, iNkonzo ePhambili".
I-BT-AUTO sele igxile kwiimarike zokukhanyisa ezizenzekelayo kwiminyaka.Siye sakha ubudlelwane bezoshishino rhoqo kunye nabathengi abavela kumazwe amaninzi kunye neendawo, ezifana neYurophu, iRashiya, uMntla Melika, uMzantsi Melika, uMzantsi-mpuma we-Asia njalo njalo, kwaye saphumelela igama elihle.Samkela ngokunyanisekileyo amaqabane akhethekileyo avela kwihlabathi liphela.
Umgangatho we-BT-AUTO wokukhanya uhlala uphezulu.Siqhuba uLawulo loMgangatho olungqongqo kuzo zonke iinkqubo, ezinje: uvavanyo oluphezulu noluphantsi lobushushu, uvavanyo lokumelana nobushushu, uvavanyo lokuguga, uvavanyo olungangeni manzi, uvavanyo olungenathuli, uvavanyo lombane oluphezulu / olusezantsi, njl.
Ubomi be-BT-AUTO buyinto entsha.Sizinikezele kuphando kunye nophuhliso, sihlala sisungula iimveliso ezintsha rhoqo.
BT-AUTO, ukuba uthenjwe.
Imbali ye-BT-AUTO ye-LED
Siliqela eliselula nelinamandla, elinobuchule kunye namava ngokunjalo.
Sinikezela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye neemveliso eziphezulu kubathengi bethu.
Ubomi bethu buyinto entsha.Sizinikezele kwi-R&D, sihlala sisungula iimveliso ezintsha rhoqo.
Inkolelo yethu "yiMthengi kuQala, iNkonzo ePhambili".
Inkampani: Guangzhou Bulbtek Electronics Technology Co., Ltd.
Ifowuni: + 86-18588664531
[TOUR] Usuku olu-1 lohambo oluya e-Jingshan Lake, eQingy...
[IMVELISO] I-HID Ballast T5 55W CANBUS Testi...
[PRODUCT] Uthelekiso lweHalogen, HID, Spe...
[IMVELISO & NOMSEBENZI] Iqela le-BT-AUTO 2 ...